Gemic rabhoritari. Matombo echisikigo nenyanzvi gemologists
GEMESI RATIDZO & KUTENGA
Permanent kuratidzwa kweanopfuura mazana maviri nemakumi mashanu emarudzi ematombo anokosha kubva kuCambodia nepasirese.
Yakazvimiririra uye yakazvimirira gemological Institute, inopa gemological kuyedza uye kutsvagisa masevhisi.
Nhanganyaya ku GEM & GEMOLOGY
GEM KUZIVISA - SYNTHETIC & TREATEMENT - PRICING & GRADING
Gemstone Museum & Kutengesa
Tenga matombo ematombo mudura redu
Yakazvimiririra uye yakazvimiririra gemological Institute, inopa gemological kuyedza, yekutsvagisa masevhisi uye matombo ematombo.
Cambodia ndiyo sosi yako masafaya, rubhi, zircons uye akawanda mabwe. Isu tinoronga kushanya kubva pamazuva maviri kusvika ku2 kusanganisira kufamba, pekuvata, kushanyira ma mine nema gem cutters.
Bata nesu kune kushanya kwakaenderana
Nhanganyaya naDheraya & Gemology
Nzira yekuziva matombo ematombo echisikigo, synthetics, kurapwa? Maitiro ekufungidzira iwo mhando uye mutengo? Iwe unowana mhinduro kumibvunzo yako yese panguva yekirasi iyi.
NEW : Nekuda kwechikumbiro chakakura kubva kuvadzidzi vedu vasingakwanise kufamba panguva yedenda, izvozvi zvave kugona kudzidza pamhepo.
Nhau dzedu dzichangoburwa, zvinyorwa nezvegombo rebwe. Nzendo dzedu uye zviitiko.
Iyo emerald hombe pasi rose Inkalamu, Shumba Emerald asi Iyo Bahia Emerald [...]
Iyo Tariro Dhayamondi ndeye 45.52 carat yebhuruu diamond. Dhaimondi rakakura kupfuura ese akambowanikwa [...]
Kutenda kuna Mai Angelina Jolie nekushanya uku kusingatarisirwe muchitoro chedu nhasi. Ndinotenda ne [...]
Mogok rwendo, Myanmar
Mogok trip in Myanmar - Mogok hotel - Mogok Burma ruby ​​Mogok trip, Myanmar Mushure me [...]
Zvishongo zvekutengesa zvishongo kuSabara Angkor Resort & Spa
Zvishongo zvekushongedza zvishongo kuSabara Angkor Resort & Spa Ms Iet vanodzidzisa vanogamuchira uye [...]
Kubvunzana muLuc Yen ini ndakabvunzurudzwa nhasi muLuc Yen, neVietnamese National [...]
Kubvunzana neFrance TV Ndakabvunzurudzwa neM6 French TV chiteshi "ENQUETE EXCLUSIVE", nezve [...]
Mazuva matatu kuendesa pasi rese
Fedex Express inotumirwa kazhinji inotora mazuva matatu kana mana kuendeswa. Siginecha inodiwa pakuendesa.
mabwe mana anokosha
Nyeredzi ruby ​​3.97 ct $79.00
Nyeredzi ruby ​​6.00 ct $120.00
Nyeredzi ruby ​​5.04 ct $101.00
Nyeredzi ruby ​​3.02 ct $60.00
Nyeredzi nyeredzi safire 1.18 ct $27.00
Bhuruu safaya 20K mhete dzegoridhe $899.00
Blue safaya 1.34 CT $174.00
Sirifi yebhuruu 2.69 ct $1,076.00
Dhaimani 0.20 ct $130.00
Champagne diamondi 1.57 ct $6,406.00
18K Rose Goridhe Diamond Ring $605.00
Dhaimani 0.38 ct $247.00
… Ruzivo rwandakadzidza rwuchakosha mune ramangwana uye ndinotarisira kutora rimwe kirasi muAmerica kuti ndidzidze zvimwe. Kana iwe uri kugara uchironga nezve kutenga zvishongo chero kupi, iwe unofanirwa kutora iyi kirasi!
… Mabwe acho akanaka chaizvo uye vashandi vacho vane hushamwari uye hunyanzvi. Ini ndakasiya chitoro neyakaisvonaka onyx mhete iyo inogara ichindiyeuchidza nguva yangu yandakapedza muCambodia :). Dai ndaive nenguva yakawanda pano ndingadai ndakada kuyedza musangano kuti ndiite mhete ini!
… Zvakakosha kushanyira Gemological Institute, uye vese vashandi vane hunyanzvi, vane moyo munyoro, vane moyo murefu uye vanotsanangura tsananguro yega yega yekufarira kwauri. Ndichadzokera kuIndi Reap uye ndotenga chiwanikwa kubva pano pakushanya kwangu kunotevera. 5 nyeredzi!
… Zvishongo zvinodhura uye zvakanaka uye tinofara nekutenga kwedu. Pakazara chiitiko chakakura chandinokurudzira zvikuru… takafara kwazvo nehunhu hwemasevhisi, izvo zvisingawanzo kuvimbiswa muIndi Reap.
… Hunhu uye maratidziro ematombo akasiyana atinogona kuwana muchitoro. Isu takazowana yakanaka chena topazi yedombo mhete, chipo chakanakira mumwe wangu! Ndatenda Gemological Institute!
Sayline / Dai 2019
… Ndakashanyirwa uye ndakadzidza zvakawanda pamusoro pemhando dzakasiyana dzemabwe anokosha.
Ini ndakanga ndisingazive nezvematombo akasiyana nematombo eCambodia. Zvinhu zvakanaka zvekuita kunze kwetembere.
Benji C / Dai 2019
… Takasarudza kudzokera kwaari tikatenga dombo. Ndinofanira kutaura kuti Daini zvirokwazvo Gemeti kuchitoro. Pasina iye, tinogona kusatomboda kutora chero chinhu kubva kuchitoro ichocho. Mhedziso, chitoro ichi chakavimbika uye ndicho chitoro chakanakisa chandingawana muIndi Reap.
… Akakurumidza kudzorera email yangu uye takasarudza dhizaini nemutengo. Iyo mhete yakasvika nekukurumidza uye ndakashamisika nemagadzirirwo akaitwa uye kunaka kwayo. Ndingakurudzira chose sevhisi uye ndichave ndichizviita zvakare.
Kuzorora23 / August 2019
… Ita shuwa yekushanyira ino nzvimbo kana uri kutsvaga matombo anokosha. Ivo ndivo chete chitoro chakazivikanwa muIndi Reap. Vashandi vari kugara zvakanyanya uye vachapindura mibvunzo yako yese.